निर्मला पन्तको परिवारसंग डा. गोविन्द केसीको ऐक्यवद्धता – Shuva News
निर्मला पन्तको परिवारसंग डा. गोविन्द केसीको ऐक्यवद्धता
Shuvanews ११ मंसिर २०७५, मंगलवार 174 Views
प्रा. डा. गोविन्द केसीले छोरीका हत्यारा सार्वजनिक गर्न मागसहित अनशनरत निर्मला पन्तका परिवारलाई धर्नास्थलमा भेटेर ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुलगेट बाहिर १७ दिनदेखि जारी धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन मंगलबार डा. गोविन्द केसी कञ्चनपुर जानुभएको थियो ।
१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ महिना बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म पनि हत्यारा सार्वजनिक भएको छैन । मंगलबार धर्नास्थलमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका केसीले सरकारले ४ महिनासम्म बलात्कारी र हत्यारा सार्वजनिक गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
सरकारले जतिसक्दो छिटो निर्मला हत्याप्रकरणका दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै डा. केसीले अहिलेको सरकार अन्धो, बहिरो, अपराधी लुकाउने र निरकुंश भएको आरोप लगाउनुभयो । निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई सरकारले नै संरक्षण गरेको हुन सक्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
डा केसीले पुस २ गतेसम्म पनि सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणका अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न नसके आफू सत्याग्रहमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ । छोरीको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राखेर १४ दिनसम्म धर्नामा बसेका बुवा यज्ञराजको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था कमजोर भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । यज्ञराजसँगै उहाँकी श्रीमती दुर्गादेवी पनि उपचारका काठमाडौं हुनुहुन्छ । जारी धर्नामा निर्मला पन्तकी कान्छी आमा लक्ष्मी पन्त बस्नुभएको छ ।